Modern bandhigga Farshaxanka, Matxaf In Europe Oo meesha aad ka heli | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Modern bandhigga Farshaxanka, Matxaf In Europe Oo meesha aad ka heli
Lovers of farshaxanka casriga ah waxay leeyihiin meelo badan in ay soo booqdaan in Europe. Xoolo ah oo la doortay sida, laga yaabaa in qayb ka mid ah ugu adag waxaa dooranaya a caga. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadineyso weeyna in ay booqasho goobaha Ra'iisul for sahaminta farshaxan Yurub, sababta ma qorsheeyo safarkaaga oo ku wareegsan? Iyada oo qaar ka mid ah iyo sidoo kale-qorsheeyey raacid tareenka, waa idin soo booqan karaan dhamaan xulatay our top of meelo lagu daawado farshaxanka casriga ah ee Europe:
Tate Modern Art gallery in London waa mid ka mid ah meelo lagu daawado farshaxanka ugu caansan casriga ah ee casriga ah ee Europe. Ma aha mid ka mid ah oo kaliya in ay booqdaan magaalada taas oo ku faantaa in ka badan 1,000 galleries. Si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid ah in uu yahay ugu caansan leh dalxiisayaasha. Tate Modern markii hore qeyb ka ahaa Tate Gallery taas oo la aasaasay 1897. Muddo, Tate bilaabay ballaarinta iyo in 2000 waxaa loo kala qaybiyey afar meelo kala duwan. Out of afar kuwa, Tate Modern waa mid ka mid ah la booqashada ugu, iyo waxa ku yaala in ka badan oo kaliya farshaxanimada. Haddii aad rabto inaad la kulanto goobta tahay London ee naftaada, aad si fudud magaalada ay gaari karaan tareen ka ugu weyn ee magaalooyinka Yurub.
National Gallery ee Art Modern iyo Contemporary, Rome, Italy
loo yaqaan National Gallery The ee casriga ah iyo Contemporary Art ee Talyaaniga, gallery tahay this ee Rome wax walba oo aad u baahan tahay. Oo waxaa dhawaan helay a fiirin cusub fresh, si farshaxanka istaagi kartaa xataa more at bandhigyo ka. gallery Tani waa mid gaar ah in ay hab oo bandhig. Waxa uu diiradda badan oo ku saabsan mawduucyada, midabo iyo foomka ka badan isku mid ah oo ay jireen waagii iyo Hababka. Oo kuu ogolaanaya in booqde kasta oo ay la kulmaan tahay in cusub a, hab gaar ah, hubinta in booqasho uu noqon doono xusuus. Rome waa magaalo weyn oo ay ku booqan tareen. Waxaa jira qaar ka mid ah wadooyinka muuqaal dabiici ah Waxaad ku qaadan kartaa jidka aad ku baranaysid inbadan oo Talyaani ah.
goobta farshaxanka casriga ah iyo casriga Switzerland ayaa waxaa buux oo firfircoon, iyadoo meelo badan oo ay dhawrto nool. mid ka mid ah in waxaa inta badan lagu talinayaa in booqasho yahay Kunsthalle Zurich. Waxay leedahay bandhigaa ku meel gaar ah aan guraynin in mu'aamaraad booqdaha. Kuwani Isbedellada joogtada caawin Kunsthalle ka fuudh ay aqoonsi mar walba. Waxaad gaari karo Zurich tareen ka Munich, Vienna, iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Yurub waa idin soo booqan on your ugaarsi farshaxanka casriga ah.
No safar ah meelo lagu daawado farshaxanka casriga ah ee Europe waa dhamaystiran oo aan booqday Paris, France. Si kastaba ha ahaatee, halkii Louvre ah, waxaan ku talinaynaa in jeeda Pompidou ee. Waxaa waxaad ka heli doontaa qaab gaar ah naqshadda oo dhan escalators ay, tuubooyinka, iyo jir steel arki karo on bannaanka ah. Laakiin waayo-aragnimo ma waxaa loo soo afjaro, sida Pompidou waxay leedahay in ka badan 50,000 shaqeeyaa ay ururinta. Waa mid ka mid ah ururinta ugu weyn ee farshaxanka casriga ah iyo kan casriga ah, taas oo dhab ahaan waa booqo. Hel in Paris tareen ka London, Amsterdam, Brussels iyo magaalooyinka kale ee Europe.
meelo lagu daawado farshaxanka casriga ah ee Europe sida xaqiiqada ah waa hortiisa ah si aad u aragto. Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan qorsheynta safarka tahay-oriented ah waa in magaalooyinka oo dhan waxaa si fudud gaaray by tareenka. Haddii aad diyaar u tahay, Ballansan Your Tigidhada in Tareenku hadda oo wuxuu ku raaxaysan safarka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/modern-art-galleries-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / fr si / NL ama / de iyo luuqado badan.
europetravel London longtrainjourneys talooyin trainjourney Tranride tareenada travelswitzerland